Mogadishu Journal » Dib u dhac ku yimid keenista Meydka Gudoomiyihii Gobolka Banaadir
Mjournal :-Waxaa goordhaw la shaaciyay in dib u dhac ku yimid keenista Meydka Gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo maanta la filayay in Muqdisho la keeno laguna aaso.
Guddiga qaban qaabada aaska Gudoomiyaha geeriyooday ayaa shaaciyay in dib u dhac ku yimid keenista Meydka marxuunka, waxa ayna sheegeen guddiga in beri la keeni doono lana aasi doono meydka Marxuum Yariisow.
Wali lama oga sababaha keenay dib u dhaca keenista meydka Gudoomiyihii gobolka Banaadir oo laga soo qaadayay dalka Qadar, waxaana maanta loo diyaar garoobay aas qaran oo loo sameyn lahaa Gudoomiyaha.
Masuuliyiin iyo dadweyne badan ayaa saakay ilaa hada garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku sugayay meydka Marxuum Eng Cabdiraxmaan Yariisow, waxaana masuuliyiinta iyo dadkii kalaba bilaabeen in ay dib uga laabtaan garoonka.
IMF oo bogaadisay Horumarka DFS ay ka sameynayso kobaca Dhaqaale ee Soomaaliya